Doorka Shibbaneyaasha Labanlaabma Ee Afka Somaliga waa Qalinki Aqoon Yahan Maxamed Baashe Xasan | Waxsansheeg News
You are here : Waxsansheeg News » Aqoon Guud » Doorka Shibbaneyaasha Labanlaabma Ee Afka Somaliga waa Qalinki Aqoon Yahan Maxamed Baashe Xasan
Posted by admina on October 11th, 2012 12:51 PM | Aqoon Guud, War
Sannad guuradii 40-aad ee hirgelinta qoraalka afkeenna ayaa hadda Qalinleyda Pen ee Soomaalidu ku hawllan tahay qabanqaabada xuskeeda meelo badan oo adduunka ka mid ah. Qormadan oo arrintaas ka soo jeedda, waxa ay hore ugu soo baxday magazine-ka Weedhsan iyo Wargeyska Alif.
Sannad guurada 40-aad ee hirgelintii farta Soomaaligu waxa ay ku soo beegmaysaa galbashada iyo godgalkii Maxamed Xaashi Dhamac (Gaarriye) oo ka mid ahaa halmuceedkii foolaadka u ahaa aqoonta, suugaanta iyo afka Soomaaliga. Gaarriye, Alle ha u naxariisto’e, waxa si milgaysan oo aan loo kala hadhin loogu aasay magaalada Hargeysa 8-da Octoobar 2012, iyada oo maydkiisa laga soo qaaday waddanka Norway oo uu ku geeriyoodey 30-kiiSeptember 2012. Maxamed Xaashi Dhamac waxa uu ka mid ahaa guddidii hirgelinta farta, iyada oo la tilmaamo inuu ahaa xubintii ugu da’da yarayd.
Afkeennu sida afafka kale kama maarmi karo xeerar iyo qawaaniin dhigaalladiisa loo raaco. Guddidii qoraalka farteenna ayaa 1972 beyaamisey qaar ka mid kuwa ugu muhiimsan xeerarkaas. Shibbaneyaasha labanlaabma ayaa xeerarkaas ka mid ah.
In kasta oo ay qaar kalena jiri karaan, haddana sida guddidaas Afka Soomaaligu isku raacday toddoba ka mid ah shibbanayaasha afkeennu way labanlaabmi karaan. Tilmaan ahaan waxa toddobadaas shibbane lagu baadi soocdaa labadan hawraarood:
Ma nala garaad baa
Sida muuqata toddobadaas shibbane ee labanlaabmaa waxa ay kala yihiin sida alfabeetada ay ugu kala horreeyaan: b d r g l m n (B D R G L M N).
Caasha waxa loo magacaabay wasiirada caafimaadka. Golahawasiiradu waxa uu ka kooban yahay sagaal rag ah iyo haweenaydaas.
Caashi waa wasiirad. Marka qodobka “da” la raaciyo waa in ay noqotaa wasiiradda. Haddii aan sidaas la yeelin oo loo qorowasiirada waxa noqonaysaa wadartii ama jamacii wasiir oo weli isna khalad ku sii jiro oo sida saxani tahay wasiirro = wasiirrada.
Qaybta labaad ee warkeenna oo ku saabsan wasiirrada oo dhan waxa aynu u qornay wasiirada oo dhawaaq ahaan ereygu jabnaanayo haddii aan xarafka “r-da” carrabka lagu adkayn ama aan la shedin, waxaana sax ah in loo qoro “wasiirrada” sida aynu xagga sare ku soo taabannay. Waxa taas u dhiganta labka iyo dheddiggawakiil. Wakiilad x wakiil. Wakiiladda oo ah haweenay waxa qoraalkeedu ka duwan yahay wadarta wakiil oo ah wakiillo oo marka qodobka la raaciyo u dhigmaysa wakiillada. Bal ha loo fiirsado kala geddisnaan wakiiladda iyo wakiillada.
Bog waxa uu mar la macne yahay xaashida ka midka ah buugga, mar kalena waa xubin ka mid ah jidhka gudaha ee aadanaha ama xoolaha. Haddii qodob la raaciyo waxa uu u qormayaa bogga.Haddii aynu labanlaabkaas ka il-duufo waxa soo baxaya boga oo ah hal magaceed (Boga). Hashayadii Boga boggaa laga hayaa X Hashii Boga bogaa laga hayaa.
Carab carrab la’ ayaa carruurta la cayaarayey markii Cali kubbadda uu Cabdi kubada kaga dhuftay. Cabdi weli kubadaa xanuunaysa ka dib markii ay kubbaddu ka haleeshay. Kubbadda x kubada
Sallaan buu fuushanaa markii Cali uu salaan wacan na siiyey.Sallaan x salaan
Cadaawe iyo Caddaawe waa laba walaalo ah. Cadaawe waa axmaq aan naxariis lahayn, Caddaawe se ha iska caddaado’e waa mayeedhaan. Caddaawe x Cadaawe
Durdurrada xajiinta leh durdurada ku dhaafa. Durdurrada x durdurada
Dhammaan caanaha way dhamaan. Dhammaan x dhamaan
Barre waa bare Afsoomaaliga dhiga. Barre x bare
Ammaan-darradu meelna caalamka amaan kama aha ee waa xumaan. Ammaan x amaan
Ereyadan soo socdaa asal ahaan ayay u labanlaabmaan oo isbeddel ku yimi dhismahoodu kuma keenin labanlaabka, waxa se jira ereyo badan oo aan labanlaabmin asalkooda hore, hase yeeshee isbeddel dhismahooda afeed ku yimi uu sababo labanlaabka ku yimaadda. Kuwa labanlaabkoodu asalka yahay ayaynu ku horrayn,waxana ka mid ah:
FG: cod”-ka” : codad”-ka”, cad”-ka” : cadad”-ka”, lud”-ka” : ludad”-ka”, bud”-ka” : budad”-ka”iwm
FG I: gar”-ka” : garar”-ka”, qar”-ka” : qarar”-ka”, qor”-ka” ; qorar”ka” iwm. waxa ay raacayaan xeerkii magacyada alanka keliya ka koobnaa.FG II: magacyada shimbir, daruur, bar, buur, habar, daar iwmisirkoodu waa keli dheddig ah oo qaata qodobka dheddigood ee “ta”. Sidaas darteed wadaraytooda shibbanaha “r” ee ay ku dhammaadaan ma labanlaabmo. Tusaale shimbir”-ta” : shimbiro”aha” ama bar”-ta” : baro”-aha”iwm
Ban”-ka” : banan”-ka”, wan”-ka” : wanan”-ka”, nin”-ka” : niman”-ka”, san”-ka”: sanan”-ka”, waaba”-ka” : waabab”ka” iwm
Ma jiraan ogaalkayga magacyo Soomaali ah oo xarafka “m” ku dhammaadaa. Hase yeeshee waxa jira macagyo lab oo ku dhammaada “n” oo marka wadaroobayaan “n”-du isu beddesho “m” labanlaabanta.
4 Sida qodobbadu ka marag-kacayaan magac kasta oo Afsoomaali ah haddii uu ku dhammaado shibbaneyaasha “d” ama “g” marka uu qodobku (da ama ga) raacayo waxa khasab ah in labanlaab yimaaddo.
Wasaaradda, dawladda, xukuumadda, Jamhuuriyadda,s iyaasadda, waddaniyadda, dimoqraaddiyadda, daacaadda, madbacadda, qaafiyadda, daaqadda, daasadda, nadaafadda, warqadda, doodda, nabadda, colaadda, niyadda, durriyadda, qabyaaladda, diyaaradda, majarafadda, laambadda, badda, dalladda, maddiibadda, malqacadda, xawaaladda, maaliyadda, shirkadda iwm
5. Magacyada qaata dabaggeliska “-nimo” ee ku dhammaada shaqal sida “i ama a” iyo xarafka “n” iyana waa in dabaggeliskooda “-nimo” ay “n-da” ku jirtaa labanlaabantaa. Tusaale:
6. Falka raaca magacuyaallada iyo tilmaameyaasha “annaga, innaga ama idinka waa in “n-da” dabaggeliska ahi had iyo jeer labanlaab ku dhacaa. Magacuyaalka “iyada” ayaa iyana xaaladaha qaar falka raacaa uu labanlaab ku yimaaddaa, gaar ahaan marka uu xarafka “d” ku dhammaado. Tusaaaleyaal:
7. Labanlaab mararka qaarkood ku yimaadda ballaadhinta erey lagu sameeyo. Tusaale:
Bar”-ta” : Barre, dakhar”-ka” : Dakharre, bil”-sha” : bille”-aha”, baal”-ka” : Baalle, jaal”-ka” : jaalle iwm
Haddii afka iyo dhismihiisa uurbaadh fog lagu sii sameeyo waa la arkaa in siyaalo kalena loo soo saari karo xaalado kale oo labanlaab yimaaddo, hase yeeshee hadda qoraalkeennan kooban waxa laga la soo dhax bixi karaa toddobadaas marxalood in ay muhiim tahay in loo dhug yeesho shibbaneyaashaas labanlaabma iyo xilliyada ay labanlaabmaanba. Ugu yaraan qof kasta oo wax qorayaa waxa habboon inuu arrintan ku baraarugsanaado, si looga baaqdo gef iyo gedmashooyin afeed oo hab qoraalkeenna ku dhex gaamura. Af aan qoraalkiisu qawaaniin la raaco lahayni kama duwanaado awr dabar la’aan dhacay ama qoon aan sharci kala dabbaalin. Afku xeerarkiisii afeed wuu leeyahay ee sirtaas ha la wada raadiyo oo dibedda ha loo soo saaro. Wixii badhitaar ah ee arrintan ku saabsan iyo ciddii xog dheeraad ah haysa ba marti baan uga ahay talo bixinteeda.
« Turkish F16 FIGHTER JETS forced a Syrian airline PASSENGER plane to land in Video
MAANSO.(1) FADGALBEED ,WAA MOHAMED XAASH DHAMAC ( GAARIYE)XASUUS GAARA AYUU KA TAGAY OON DUUGOOBAYNIN ILAAHAY HA U NAXARIISTEE. »